Ncheta agbamakwụkwọ Onyinye - Họrọ Best ncheta agbamakwụkwọ Onyinye i
> Resource> Atụmatụ> Wedding ncheta Onyinye - Họrọ Best Wedding ncheta Onyinye
A ncheta agbamakwụkwọ bụ mgbe a kwesịrị ncheta ihe omume nke a di na nwunye na-anọchi anya di na nwunye si nọgide nkwa na ịhụnanya ọ bụla ọzọ. Ncheta onyinye bụ akụkụ dị mkpa nke na-eme ememe kwa afọ agbamakwụkwọ anniversaries, na-egosi ịhụnanya gị na ntị gị. Mgbe ahụ ihe bụ ihe ziri ezi ncheta agbamakwụkwọ onyinye site afọ ka mma ibuga mmetụta gị? Ụfọdụ zuru okè ncheta agbamakwụkwọ onyinye echiche na-awa n'okpuru enyere gị aka ịhọrọ a oké ncheta agbamakwụkwọ onyinye maka ncheta agbamakwụkwọ unu. Nye gị hụrụ n'anya a na-emetụ n'ahụ onyinye na ga-echetara ya / ya nke gị ụtọ na-echeta ọnụ!
Part 1. Pụrụ iche na nke ahaziri ncheta agbamakwụkwọ onyinye
Part 2. Wedding ncheta onyinye site afọ
Part 1. Pụrụ iche na nke ahaziri ncheta agbamakwụkwọ onyinye echiche
Ahaziri na pụrụ iche ncheta agbamakwụkwọ onyinye na-egosi onye gị na ị na-eche banyere ya / ya. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe nwere ike ịbụ ihe kasị mma ahaziri ncheta agbamakwụkwọ onyinye maka ndị ị hụrụ n'anya, mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịtụle gifting a foto nke gị kwesịrị ncheta oge ọnụ. A ahaziri pụrụ iche ncheta agbamakwụkwọ onyinye na-egosi na i ji na ji mmekọrịta gị, n'ihi ya, dị nnọọ na-eji oge na-ewetara onye ncheta onyinye na a onye aka maka gị ncheta ememe!
1. ahaziri ncheta agbamakwụkwọ onyinye: ncheta n'ụlọ nkiri
Ịmepụta Foto agbamakwụkwọ & video nkiri na foto gị na songs bụkwa ezigbo echiche maka ncheta onyinye inye. Wedding DVD slideshows dị oké ọnụ ahịa keepsakes. Ị nwere ike chebe gị kwesịrị ncheta oge ruo mgbe ebighị ebi site mbịne ọkacha mmasị gị agbamakwụkwọ foto n'ime pụrụ iche Foto agbamakwụkwọ slideshows on DVD na ụfọdụ DVD ngosi mmịfe software.
2. ahaziri ncheta agbamakwụkwọ onyinye: ncheta ebe nchekwa akwụkwọ
Ikpokọta a foto album na-echeta akwụkwọ na a dijitalụ scrapbooking software. Nke a foto akwụkwọ ga-abụ a zoro ezo nrite maka ihe ọ bụla di na nwunye. Chebe alụmdi na nwunye gị ndụ na foto akwụkwọ na mgbe niile nwere ndị na-atọ ụtọ na-echeta na obi!
3. ahaziri ncheta agbamakwụkwọ onyinye: kanyere ihe
A na-ewu ewu ahaziri ncheta agbamakwụkwọ onyinye echiche bụ kanye ihe ị chọrọ ikwu na onyinye, dị ka n'elu a iko, na n'elu nkú cover nke a akwụkwọ. Site ákwà ọla-ọcha, akpụkpọ anụ ka gold, nkebi ahịrịokwu ma ọ bụ aha e nwere ike na-etinye na bụ oké ncheta agbamakwụkwọ onyinye.
1st ncheta agbamakwụkwọ onyinye echiche
Otu di na nwunye mbụ ncheta agbamakwụkwọ n'egosi ọgwụgwụ nke a n'afọ nke ịrịba ukpụhọde ka newlywed di na nwunye na-akawanye mara ibe mma na emen n'ime di na nwunye, si otú ahụ akpa ncheta bụ oké ememe. E nwere ụfọdụ mbụ ncheta agbamakwụkwọ onyinye echiche na-asọpụrụ a pụrụ iche.
Tiketi: Ịzụta ụfọdụ tiketi ka ihe ogige ntụrụndụ, egwu, na ememme, Museum, play ma ọ bụ egwuregwu omume maka akwụkwọ
ncheta.> Gosikwa agbamakwụkwọ kaadị: Mee ka a ahaziri agbamakwụkwọ kaadị ma ọ bụ kalenda na foto gị ọnụ eji ihe niile-na-otu foto kaadị na scrapbook software buo oge obi ụtọ mgbe ị na-enyefe onye ọ bụla
ọzọ.> Wedding scrapbook: Na a ọma agbamakwụkwọ dijitalụ scrapbooking software na ụfọdụ oké agbamakwụkwọ scrapbook echiche, na-eme a akwụkwọ scrapbook featuring photos na i mere maka nwunye gị bụ a bara uru onyinye .
2nd ncheta agbamakwụkwọ onyinye echiche
Owu na china bụ ezi onyinye maka 2nd ncheta agbamakwụkwọ na n'okpuru bụ ụfọdụ 2nd ncheta agbamakwụkwọ onyinye echiche metụtara owu na china.
> Ịchọ Mma iberibe: Ụfọdụ ji achọ ihe mejupụtara owu uwe ga-enyere na-ewetara gị ịhụnanya miri
emi.> Ọkpụkpụ china crockery: Onyinye nwunye gị na ọkpụkpụ china crockery. Ọkpụkpụ china iko, efere, ọkwá wdg nwere ike
nkà.> China Jewelry: Jewelry mere nke china nwekwara ike nkà, dị ka ọla ntị, olu, ọla aka, mgbaaka wdg
3rd ncheta agbamakwụkwọ onyinye echiche
The atọ ncheta na-eme ememe ncheta site akpụkpọ anụ omenala. Dị ka oge a ncheta akara crystal ma ọ bụ iko bụ onyinye maka 3 afọ nke alụmdi na nwunye.
> Akpụkpọ anụ laptọọpụ akpa / ikpe: A akpụkpọ anụ cover ga-hụ nnata laptọọpụ a nọ ụgbọ
mmiri-udi.> Akpụkpọ anụ paspọtụ njide: A akpụkpọ anụ paspọtụ njide bụ ezigbo 3rd ncheta agbamakwụkwọ onyinye maka ndị na-amasị-ejegharị
ejegharị.> Glass ọkpụkpụ: N'ihi na a fancier onyinye a di pụrụ ime ndokwa nwere iko ọkpụkpụ mere maka nwunye ya.
4th ncheta agbamakwụkwọ onyinye echiche
The omenala anọ ncheta agbamakwụkwọ onyinye bụ mkpụrụ osisi na okooko osisi. Oge a na onyinye bụ ákwà ọcha, silk, ma ọ bụ naịlọn. Họrọ zuru okè anọ ncheta agbamakwụkwọ onyinye maka nwunye gị.
> Mkpụrụ na okooko osisi: The ukara ifuru nke anọ ncheta bụ geranium. Ị nwere ike ịzụta geraniums akụ n'èzí n'ụlọ gị. Ọ bụrụ na nwunye gị na-arụ ugbo, mgbe ahụ, a bụ nke zuru okè
onyinye.> Linin / Silk / naịlọn: tụlee ịzụta a linin tablecloth maka nke ihunanya nri abalị. Mgbe ahụ-akpali n'ime ụlọ ihi ebe e nwere ọhụrụ silk Ibé akwụkwọ na-eche nwunye
gị.> Jewelry: The ukara nkume nke anọ ncheta bụ-acha anụnụ anụnụ topaz na-adịchaghị oké ọnụ ọzọ ịbụ-acha anụnụ anụnụ zircon. Ego ya ọla igbe ịhụ ihe na ụdị na-ekwekọghị nke ọla ọ na-enwe mmasị na ịzụta ya ndị.
5th ncheta agbamakwụkwọ onyinye echiche
5th ncheta agbamakwụkwọ, osisi ncheta bụ nke mbụ isi milestone ncheta ke alụmdi na nwunye gị. Ị nwere ike ikpebi na ụfọdụ osisi-metụtara onyinye.
> Wood foto okpokolo agba: Nwere ahaziri osisi foto etiti usọrọ gị 5th ncheta
agbamakwụkwọ.> Wood foto albums: E nwere foto albums dị na ihu na azụ mkpuchite na-mere nke osisi. Mee ka a scrapbook na ntị na-etinye ọnụ na a ajị
cover.> Wood keepsake Igbe: Mee ka a keepsake igbe na adabara udi na size ma kanye gị nkwupụta nke ịhụnanya na ya na-enye nwunye gị a na mberede.
10th ncheta agbamakwụkwọ onyinye echiche
The omenala iri ncheta agbamakwụkwọ onyinye echiche bụ tin ma ọ bụ aluminum ndị a, a onyinye ndepụta gụnyere diamonds. Ebe a na-10th ncheta agbamakwụkwọ onyinye echiche.
> Aluminom bakeware ma ọ bụ cookware: Aluminom bakeware ma ọ bụ cookware bụ oké ncheta onyinye echiche inye a di na nwunye na-arụ isi nri na mmiri n'ụlọ ma ọ bụ atọ
ụtọ.> Art / ọkpụkpụ: Art ma ọ bụ ọkpụkpụ kere si tin ma ọ bụ aluminum ihe nwere ike e nyere iji dị n'ụlọ ha.
20 na 25th ncheta agbamakwụkwọ onyinye echiche
Nke 20 na nke 25th ncheta agbamakwụkwọ bụ milestones, nri? Mgbe ahụ shat ụfọdụ ezi ncheta agbamakwụkwọ onyinye?
> Photo show DVD: Tinye foto nke gị obi ụtọ ná ndụ ihe karịrị afọ na a DVD, tinye ịhụnanya songs na ndị ọzọ na mmetụta maka ekere òkè na weebụ ma ọ bụ na-ekiri na TV. Ị nwere ike ichekwa ya ruo ọtụtụ afọ. Na ihe niile na-na-otu DVD nkiri Ndinam software, ị nwere ike ịmepụta a agbamakwụkwọ DVD ngosi mmịfe mee ka gị na ncheta agbamakwụkwọ pụrụ iche karịa mgbe ọ
bụla!> Family osisi foto collage: Mee ka a dị mfe ezinụlọ osisi foto collage buo gị na ezinụlọ
gị.> Ụbọchị guzosie ike ezinụlọ ụlọ e dere ede: Ezigbo maka ncheta di na nwunye na dịkwa n'ebe ụmụ mmadụ n'ụlọ ha ma nwere ezinụlọ siri ike ụkpụrụ. Ihe e dere na-ekokwasị n'ihe na-abụghị nke ha n'ụlọ, na ụbọchị ha lụrụ na n'ihu.
30th ncheta agbamakwụkwọ onyinye echiche
Kemgbe ụwa, nkume pel na-iri atọ ncheta agbamakwụkwọ onyinye, na ola diamond ndidi n'elu oke n'oge a.
> Photo album: A foto album na gị foto site na gị na ụbọchị agbamakwụkwọ ruo ugbu oge ga-eme ka a pụrụ iche na-echeta album. Jide n'aka na ị na-ahọrọ a scrapbook software na dị mfe iji ma dị
ike.> Nọrọ n'ụlọ a ọzọ: Hosting ihe ncheta ọzọ bụkwa oké onyinye, nke na-eweta ọnụ enyi na ndị ezinụlọ na-enwe ọtụtụ ihe ndị ọzọ
fun.> Nke abụọ honiimuunu maka di na nwunye: A abụọ honiimuunu bụ oké ncheta agbamakwụkwọ onyinye echiche di na nwunye bụ ndị kemgbe ọnụ maka afọ 30. Enwe gị ndụ ọnụ na relive onye obi ụtọ
ugboro!> Diamond ọla: Diamonds bụ oge a item metụtara a iri atọ ncheta agbamakwụkwọ. Ụzọ kasị mma inye diamonds bụ n'ụdị diamond ọla. A onyinye pụrụ ịbụ olu, ọla ntị, a pendant ma ọ bụ kọflịnks maka ya.
40 ncheta agbamakwụkwọ onyinye echiche
Ruby na ọtụtụ kwuru na afọ 40 nke alụmdi na nwunye. Ọ bụ kweere na rubies nwere a na-adịgide adịgide n'ime ire ọkụ dị nnọọ ka a di na nwunye si ahuhu maka onye ọ bụla ọzọ mgbe afọ 40 ọnụ. Oriri anya gị na ndị na-esonụ ncheta agbamakwụkwọ onyinye echiche.
> Okooko osisi: The kasị ezigbo okooko osisi ma ọ nke 40 ncheta bụ ubi nasturtium. Otu ọzọ bụ rubi-acha rịa
bilie.> Ruby ọla: Nye ndị fancy di na nwunye kenha ọlaọcha ọla na
rubies.> Audio CD: kpokọta songs si oge nke alụmdi na nwunye ha n'ime ihe Audio CD. Ọ bụrụ na i nwere ike ịchọpụta ihe agbamakwụkwọ ha songs na onye ọkacha mmasị bụ, ka mma.
50th - 60th ncheta agbamakwụkwọ onyinye echiche
Mgbe ị ga-esi gị iri ise ma ọ bụ sixtieth ncheta, ị na-ele ndụ a obere dị iche iche, na ihe onwunwe na-adịghị dị mkpa dị ka ha dị mgbe ị bụ nwata, otú mgbalị ọ bụla a na mgbe nile ekele mgbe na-enye di na nwunye a iri ise ma ọ bụ sixtieth ncheta onyinye. Ebe a bụ ụfọdụ aro maka onyinye maka di na nwunye na ha ma ọ bụ sixtieth ncheta agbamakwụkwọ.
> Nwere sere ma ọ bụ caricature mere nke agbamakwụkwọ ha
foto> Kama a ọbịa akwụkwọ, ịzụta a music igbe jupụta ya na ozi nke ịhụnanya na e dere ma ọ bụ ọlaedo ejiri mee akwụkwọ si ezinụlọ na ndị
enyi> Gịnị nwere ike inyere aka ha n'onwe anyị? Ị pụrụ mgbazinye a ụgbọ ala maka ha? Akwụ ụgwọ maka a kichin ma ọ bụ ndị ọzọ n'ụlọ ntaghari ohuru?